Sida loo rakibo Google Tag Manager iyo Universal Analytics | Martech Zone
Axad, Oktoobar 30, 2016 Isniin, Disembar 7, 2020 Douglas Karr
Waxaan macaamiisha u wareejinaynay Google Tag Manager dhawaan. Haddii aadan wali maqal maaraynta tagga, waxaan qornay maqaal qoto dheer, Waa maxay Tag Tag? - Waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad aqriso.
Taaggu waa qeyb yar oo koodh ah oo macluumaad u diraya dhinac saddexaad, sida Google. Haddii aadan isticmaalin xalka maareynta astaamaha sida Tag Manager, waxaad u baahan tahay inaad ku darto jeexjeexyadaan koodhka si toos ah faylasha boggaaga ama barnaamijka mobilada. Guudmarka Maareeyaha Tag Tag
Marka laga reebo faa'iidooyinka maaraynta tag, Maareeyaha Google Tag Manager wuxuu leeyahay xoogaa taageero ah oo loogu talagalay codsiyada sida Google Analytics sidoo kale waxaad u baahan doontaa inaad ka faa'iideysato. Sababtoo ah wakaaladeennu waxoogaa ayay ka shaqaysaa istiraatiijiyadda nuxurka ee macaamiisheenna, waxaan ku wareejineynaa GTM dhammaan macaamiisheenna. Maamulaha Google Tag Manager iyo Universal Analytics, waxaan ku habeyn karnaa aragti dheeri ah Google Analytics 'Waxyaabaha ay ka kooban tahay iyadoon loo baahneyn in lagu saxo koodhka aasaasiga ah ee macaamiishayada. Uqeybinta labadooda si ay ula shaqeeyaan midba midka kale maahan qalbi jilicsan, in kastoo, marka waxaan rabaa inaan kuu diiwaangaliyo.
Waxaan ku qori doonaa maqaal mustaqbalka ah oo ku saabsan qaabeynta Isukeenida Mawduuca leh Maareeyaha Google Tag, laakiin maqaalka maanta, waxaan leeyahay 3 yoolal:
Sida loo rakibo Google Tag Manager on your Site (oo leh faahfaahin qaar ka mid ah oo loogu talagalay WordPress lagu daray).
Sida loogu daro isticmaale wakaaladdaada si ay u maareeyaan Maareeyaha Google Tag.
Sida loo qaabeeyo Google Universal Analytics gudaha Maareeyaha Google Tag.
Maqaalkani adiga kaliya looma qorin, dhab ahaantii waa tallaabo tallaabo loogu talagalay macaamiisheenna sidoo kale. Waxay noo oggolaan doontaa inaan u maamulno GTM iyaga oo sii wadno inaan labadaba kor u qaadno sida qoraallada dibedda loo raro iyo sidoo kale kor u qaadista warbixintooda Google Analytics.
Sida loo rakibo Maareeyaha Google Tag
Ka faa'iideysiga gelitaankaaga Google Analytics, waad arki doontaa taas Maamulaha Google Tag hadda waa ikhtiyaar kujira liiska asaasiga ah, guji kaliya Saxiix In:
Haddii aadan waligaa horay u dhigan koontada Google Tag Manager, waxaa jira saaxir fiican oo kugula socodsiiya sameynta koontadaada ugu horreysa iyo weelka. Haddii aadan fahmin ereyga aan adeegsanayo, hubi inaad ku daawato fiidiyaha fiidiyowgan ee kugu dhex socda!
Marka hore, magaca koontadaada. Caadi ahaan, waxaad ku magacaabi doontaa magaca shirkaddaada ama qaybtaada si aad u hesho oo aad u maamusho mid kasta oo ka mid ah bogagga iyo barnaamijyada laga yaabo inaad ku haysato Google Tag Manager si fudud.
Hadda koontadaada ayaa la dejinayaa, waxaad u baahan tahay inaad sameysid tan ugu horeysa weelka.
Markaad gujiso abuuro, waxaa lagu weydiin doonaa inaad ogolaato Shuruudaha Adeegga. Markaad ogolaato, waxaa lagu siin doonaa laba qoraal si aad u geliso bartaada:
Fiiro gaar ah u yeelo meesha aad gelineyso astaamahan qoraalka ah, waxay gabi ahaanba muhiim u tahay habdhaqanka wixii astaamo ah ee aad ku maareyn doonto Google Tag Manager mustaqbalka!
Isticmaalka WordPress? Waxaan aad ugu talin lahaa Duracelltomi Maareeyaha Google Tag Tag WordPress Plugin. Markii aan u qaabeyno Kooban Mawduucyada Google Analytics, qalabkaan wuxuu awood u siinayaa astaamo leh xulashooyin la dhisay oo kaa badbaadin doona murugo badan!
Haddii aad u qaabeyneyso GTM adoo adeegsanaya qalab saddexaad ama is-dhexgal, waxaa caadi ahaan lagu weydiisanayaa adiga Aqoonsiga Kontoroolka. Hore ayaan uga sii gudbay oo waxaan ku wareejiyay shaashadda kore. Ha ka welwelin inaad qorto ama aad ilowdo, GTM waxay ka dhigeysaa inay ku fiicnaato oo ay fududahay koontadaada GTM.
Ma qoraalkaaga qoraalka ah ama qalabka wax lagu duubo ayaa la raray? Cajiib! Maareeyaha Tag Google ayaa lagu rakibay goobtaada!
Sida Loo Siiyo Wakaaladaada Helitaanka Google Tag Manager
Haddii tilmaamaha kor ku xusan ay xoogaa dhib yaraayeen, waxaad si toos ah ugu boodi kartaa siinta helitaanka hay'addaada. Kaliya iska xir saaxir oo guji Maamulka qeybta sare ee bogga:
Waxaad ubaahantahay inaad gujiso Maareynta Isticmaalaha oo ku dar wakaaladdaada:
[sanduuqa nooca = ”digniinta” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”80%”] Waxaad ogaan doontaa inaan dhammaan marin u siinayo isticmaalehan. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ula dhaqanto gelitaanka hay'addaada si ka duwan. Caadi ahaan, waxaad ku dari doontaa wakaaladdaada isticmaale ahaan kadibna waxaad siin doontaa awood ay ku abuuraan laakiin aan daabicin. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sii haysato xakamaynta isbeddelada tag daabacaadda. [/ Box]
Hadda wakaaladdaadu waxay marin ka heli kartaa bartaada gudaheeda koontadooda Google Tag Manager. Tani waa qaab aad ufiican oo markaa iyaga laga siinayo aqoonsigaaga isticmaalaha!
Sida loo qaabeeyo Google Universal Analytics gudaha Maareeyaha Google Tag
In kasta oo GTM si sax ah loogu rakibay bartaada waqtigan, runti waxba kama qabanayso illaa aad daabacdo sumaddaada koowaad. Waxaan sameyneynaa taagaas ugu horeeya Falanqaynta Universal. Riix Kudar Tag Cusub goobta shaqada:
Guji qaybta calaamadda oo waxaad ku kicin doontaa xulashada astaamaha, waxaad u baahan doontaa inaad doorato Falanqaynta Universal:
Waxaad ubaahantahay inaad kahesho lambarkaaga UA-XXXXX-X qoraalkaaga Google Analytics ee horey ugujiray goobtaada kunaqo qeybta saxda ah. Ha gujin kaydinta weli! Waa inaan u sheegaa GTM goortaad rabto inaad sumaddaas shiddo!
Iyo, dabcan, waxaan dooneynaa in sumadda la shido markasta oo qof uu bog ka daawado boggaaga:
Hadda waad dib u eegi kartaa dejinta astaamahaaga:
Dhagsii keydka waxaad arki doontaa soo koobitaan ku saabsan isbedelada aad sameysay. Maskaxda ku hay in sumadda weli aan lagu daabicin bartaada - taasi waa muuqaal weyn oo ah GTM. Waad sameyn kartaa tanyo isbeddel ah oo aad xaqiijin kartaa goob kasta kahor intaadan go'aansan inaad ku daabacdo isbeddelada tooska bartaada:
Hadda oo sumaddeenna si habboon loo qaabeeyey, waxaan ku daabici karnaa boggeena! Dhagsii Daabac oo waxaa lagu weydiin doonaa inaad diiwaangeliso isbeddelka iyo waxaad sameysay. Tani aad ayey waxtar u leedahay haddii aad leedahay maamulo badan iyo la-hawlgalayaal hay'adeed oo ka shaqeeya bartaada.
[sanduuqa nooca = ”digniinta” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”80%”] Kahor intaadan daabicin cinwaannadaada beddelka bartaada, hubi inaad ka saar wixii qoraallo Google Analytics ah ee hore gudaha goobtaada! Haddii aadan sameyn, waxaad arki doontaa qaar ka mid ah runtii xadgudubyo guuleysan iyo arrimo la xiriira adiga Analytics warbixinta. [/ sanduuqa]
Boom! Waxaad riixday daabicisna nooca ayaa lagu keydiyay faahfaahinta wax ka beddelka astaamaha. Universal Analytics waxay hada ku shaqeynayaan bartaada.
Hambalyo, Maareeyaha Google Tag ayaa si toos ah ugu jira bartaada iyadoo Universal Analytics loo habeeyay loona daabacay inay tahay sumaddaadii ugu horreysay!
Tags: ku dar marinka isticmaalahaAnalytics googlegoogle tagmaareeyaha tag googlemaareeyaha tag google ku dar isticmaalegoogle tag maareeyaha taggoogle tag maareeyaha taggoogle Analytics guudgtmweelka gtmsida looku rakib maareeyaha tag googlearagtiyada boggamaaraynta tagmaareeyaha tagkicinta aragtida boggafalanqaynta caalamiga ah
Waxaad tahay shakhsiyad fart dhab ah - WAAN UTAHAY - smart fella article Maqaalkani waa qumman yahay - sida saxda ah ee aan ugu baahnaa hirgelinta GTM. Mahadsanid shaashadaha shaashadda